Tag: tantaran'ny mpanjifa | Martech Zone
Tag: tantaran'ny mpanjifa
Tokony ho iray volana lasa izay, dia tokony handray anjara amin'ny fivorian'ny ideolojia marketing ho an'ny mpanjifa iray aho. Nahafinaritra izany, niara-niasa tamin'ny consultancy fantatra amin'ny famolavolana roadmaps ho an'ny orinasa teknolojia avo lenta. Rehefa novolavolaina ireo sori-dalana, dia nahavariana ahy ny lalana tsy manam-paharoa sy miavaka natrehin'ny ekipa. Na izany aza, tapa-kevitra ihany koa aho ny hitazomana ny ekipa hifantoka amin'ny tsena kendrena. Ny fanavaozana dia paikady fitsikerana amin'ny indostria maro ankehitriny, fa
Tsy mahafatifaty ianao izao?
Zoma 20 Novambra 2009 Alahady, Aogositra 19, 2012 Chris Lucas
Indray mandeha nisy olona nilaza taminay fa izahay, na ny marina ny fangatahana fananganana endrika, dia tsy “mamoafady”. Amin'ny lafiny sasany dia heveriko fa marina izany olona izany. Ny endriny, tsy manaitaitra ny endriny, fa ho an'ireo olona mampiasa azy ireo ary miankina amin'izy ireo mba hanangonana angon-drakitra, izy ireo, raha tsy sipa, dia tena zava-dehibe. Ka ahoana no anaovanao, tompona orinasa, mpivarotra sns, izay manana vokatra na serivisy tsy "mahamenatra" manao azy ho "mahamenatra"? Eto